“Afka ayaa qaleel i ahaa oo xitaa waan la hadli waayay saaaxiibadeyda,”. Ander Herrera – Gool FM
“Afka ayaa qaleel i ahaa oo xitaa waan la hadli waayay saaaxiibadeyda,”. Ander Herrera
Byare May 9, 2016
(Manchester) 09 Maajo 2016. Kubbad qaabeeyaha Man United Ander Herrera ayaa daaha ka rogay inuu ku dhibtoonayo waqtiga kuleelaha ee England iyadoo ay jirto inuu ka yimid dalka Spain oo aan dab yar shideen.
Herrera ayaa sheegay inuu awoodi waayay inuu la hadlo xitaa saaxiibadiisa intii lagu jiray ciyaartii sabtida ay 1-0 ku mareen Norwich sababo la xiriira deegaanka.
Laacibkii hore ee Athletic Bilbao ayaa yiri:”Waa mid la mid ah koonfura Spain, laakiin Spain jawigu dhaqso iskuma badelo.
“Kulankii aan ka hortagnay Norwich, aad ayuu u adkaa lama aan hadli karin xitaa saaxiibadeyda maxaa yeelay afka ayaa aad ii qalalnaa.
“Laakiin ugu dambeyn waxaan helnay saddexda dhibcood, weli tartanka ayaan ku jirnaa, waxaan xoogaa cadaadis saarnay Manchester City waana dagaalami doonaa tan iyo dhammaadka.”.
Rajada Man United ee booska afaraad ayaa si wayn u soo noolaatay kaddib markii xalay bar-baro lagu celiyay Man City, waxayna Red Devils berito la ciyaari doontaa kooxda West Ham kulan go’aan ka gaari kara inay CL soo aadi karto kal ciyaareedka soo socda iyo inkale.
Real Madrid iyo Barcelona oo uu min hal kulan u harsan yahay, Taariikhda La Liga maxay ka leedahay kulankan?…(Aqriso warbixin la turxaan bixiyay)
HOR DHAC: West Ham United vs. Manchester United (West Ham waa kulan micno dareen wata ugu fadhiya balse United iyada waa u guul ama geeri!)